Isithombe somlumbi nge-Halloween ngezandla zakhe. Indlela yokudala isithombe somlingo we-Halloween ekhaya
Isithombe, ngaphandle kokungekho ukugubha usuku lonke lamaSanta - umlumbi. Futhi lena yinkinga engavamile uma abathakathi abaningana bebanjwe kwelinye iqembu bengakufuni ukufana komunye nomunye, kodwa qhubekani nijabule ngesitayela somlobi wangempela. Yebo, futhi kungani ukuxabana, ngoba isithombe sobuqili siningi kangangokuthi amathuba okuhlangana izingubo ezimbili ezifanayo azifaneleki. Futhi ubuhlungu obungavamile, amandla omlingo, ukubukeka kobulili kwenza ubuqili obumnyama bezinhlamvu ezidumile kakhulu ze-Halloween.
Indlela yokudala isithombe sesifazane somlumbi we-Halloween
Izimo ezihlukahlukene ezithandwayo zesithombe se-sorceress omnyama zingahlukaniswa ngamaqembu amathathu:
Ake sicabangele ngamunye wabo ngokuningiliziwe. Ngokuba izinkohliso ezikhohlisayo, izingubo ezingenangqondo ziyisici: izingubo eziqinile, iziketi ezifushane, i-corsets, i-decollete ejulile, izithende eziphakeme. I-makeup yabo nayo i-sexy kakhulu: izindebe ezibomvu ezicacile, i-smokey-ice, i-eyelashes yamanga.
Isisekelo sokudala isithombe seDisney singabathakathi emidwebheni ethandwayo. Isikhumba esibuhlaza, ukwakheka kwamathoni aluhlaza okwesibhakabhaka-omnyama, isembatho eside nesigxobo esinqunyiwe kanye nekolishi ephezulu - nasi uhlu oluyisibonelo lwezimfanelo zobungani bezintambo.
Kodwa okwamanje okufanelekile kakhulu kusihlwa kubo bonke abangcwele kuyindlela yokugcina - isithombe somlumbi omdala ombi. Lo mlingisi usikhumbuza yonke i-Babu Yaga ejwayele: ikhala eliphephile, ama-warts, ama-broomsticks nama-rags ayekade egqoka.
Yikuphi kwezithombe ezilandelayo ongakhetha kuzo ku-Halloween kuncike ekucabangeni kwakho kuphela. Siyaqaphela ukuthi imininingwane ejwayelekile yezo zonke izinhlobo ziyi: isikhwama esikhonjiwe, izinwele ezimnyama, izipikili ezide, izicathulo ezinamasokisi abukhali, kanye nokuhlobisa ngendlela yama-bomber, amantombazane, izinyoka namakati amnyama.
Umlumbi omncane: isithombe somlingo we-Halloween ngentombazane
Isithombe somlumbi e-Halloween sithandwa emantombazaneni amancane. Ngaphezu kwalokho, akulula ukuyidala ekhaya. Konke okudingekayo kumfashini womlumbi osemusha: isicu esicacile, igqoko elimnyama, ama-leggings emigqabhagqabha nomshanelo. Esikhundleni sengubo, igalofu elimnyama neketi elikhukhumezayo elenziwe nge-tulle, okuyinto, ngendlela, engenziwa ngezandla zakho. Ngoba lokhu kwanele ukulungisa ubude obufushane obunzima bombala obumnyama, obuluhlaza obuluhlaza obuhlaza obuluhlaza emhlabeni wonke. Njengesizathu sokwakheka, ungasebenzisa izithunzi eziluhlaza, ezixubene nesisekelo se-tonal ne-lipstick eluhlaza okwesibhakabhaka. Futhi, ubuso bomntwana buzohlotshaniswa nama-cobwebs noma amacu amamandane, ikati elimnyama.
Ukuqapha okukhethekile kufanele kuhokhwe izicathulo zezingane. Kumele abe esithendeni esincane ephethe amasokisi amakhulu.
Imidlalo yebesifazane 2015: izitayela eziyinhloko namamodeli wamanje
Izinto eziyisisekelo ezingu-TOP-3 ze-wardrobe yezimfashini-2017
Imithetho yekhodi yokugqoka ibhizinisi
Izingubo zasebusuku ziphelele
Inhlanganisela yegolide ezembatho
Isithombe sikaMaria Maksakova, 16 kg omncane ku-Eurovision-2017, washaya i-Internet
Ukudla okuhlukile: ukuhambisana komkhiqizo
Amehlo ama-Puffy ekuseni, imbangela
Ikhekhe ngekhilimu ushizi
Amakhekhe we-chocolate nge usawoti
Indlela yokuthuthukisa ithoni yesikhumba?
Izindawo zokuphulukisa nemilingo ye-chrysoberyl